Ezona ndawo zibalaseleyo zedesktop zikaBuntu kunye neziphumo | Ubunlog
Ezona ndawo zibalaseleyo zedesktop zikaBuntu kunye neziphumo
Phambi kokufika kwenguqulelo entsha yoBuntu, baninzi abakwinkqubo yokuhlaziya. Ngelixa omnye wemibuzo onempembelelo kuyo yale nguqulo intsha yinyani yokuba ibalulekile kunye neGnome njengendawo yendawo yedesktop emiselweyo.
Ngelixa ayisiyonto enkulu, kuba Ayisiyiyo kuphela imeko-bume yeDesktop ekhoyoEwe, yiyo loo nto kukho iintlobo ezahlukeneyo zoBuntu abonelela ngazo inkqubo kwenye indawo engeyiyo enenguqulo emiselweyo engu-17.10 Artful Aardvark.
Apha ndiza kuthatha ithuba lokwazisa malunga neendawo ezaziwa kakhulu zedesktop kwinkqubo yakho yokusebenza, nayiphi na kwezi ayinakufakwa ku-Ubuntu kuphela kodwa nakuso nasiphi na isiphumo sayo.
1 Imeko ezahlukeneyo zedesktop kubuntu
1.3 IPlasma Desktop
1.7 U khanyiso
Imeko ezahlukeneyo zedesktop kubuntu
Ngaphambi kokuba uqale ngeli nqaku kuyakubaninzi abaya kuba nakho ukubeka izimvo zabo ngee-flavour ezahlukeneyo zoBuntu koku, ayishiyi ecaleni ukuba ungazinika ithuba lokuzama nayiphi na kwezi.
ICinnamon yindawo ye desktop Yenziwe liqela lophuhliso lweLinux Mint le njengemfoloko yeGnome 2.x, Kodwa ngamandla eGnome 3.x kwaye njengenye indlela yabo bangaqinisekanga ngoBunye okanye iGnome-Shell
Ukufakela imeko-bume enkulu yedesktop kuyimfuneko ukongeza indawo yokugcina kwinkqubo, nangona sele ikwindawo yokugcina esemthethweni Ubuntu, kuya kufuneka uyazi ukuba abanayo le nguqulelo yangoku:
Ukufakwa kwiindawo zokugcina Ubuntu:
Sebenzisa indawo yokugcina esemthethweni
Iqabane ngu imeko-bume ye desktop ivela kwiGnome 2 codebase. Izalwe kukungoneliseki kwabanye abasebenzisi ngeqokobhe leGnome 3 kwaye ngubani okhethe ukuhlala nemodeli esetyenziswa yiGnome 2.
Ukuze ufake iMate njengendawo yedesktop, vula nje itheminali kwaye uthayiphe oku kulandelayo:
Yindawo yokuqala yokusebenza eyenziwe yi KDE. Ngaba yenzelwe iidesktops ezinkulu kunye neelaptops, ime ngaphandle ngokuba noluhlu olubanzi loqwalaselo kunye nokuvumela ukuphambuka okungagungqiyo kuyilo olungagqibekanga.
Ngelixa kukwakho neNqaku lencwadi yeplasma ye KDE.
Incwadana yePlasma yindawo yokusebenza ye KDE eyayiphuhliswe ngokukodwa ukufumana okuninzi kwizixhobo eziphathwayo Njenge-netbook okanye i-pc yethebhulethi.
Ukongeza le meko, kufuneka songeze i-Kubuntu zokugcina:
Okanye ukongeza le migca kwimithombo yolwazi.list
Ufakelo silwenza kunye:
Kwaye nohlobo lweeNcwadana:
Yimeko yedesktop enobunzima kwaye injongo yakhe kukukhawuleza usebenzisa izixhobo ezimbalwa zenkqubo ngelixa uhlala ubonakala unomdla kwaye kulula ukuyisebenzisa.
Vula nje i-terminal kwaye ubeke oku kulandelayo, ukuze ufakele:
Ayenzelwanga ukuba ibe nzima njenge-KDE okanye i-GNOME, kodwa iyasebenziseka kwaye ayisindi, kwaye igcina ukusetyenziswa kwamandla kunye namandla. Ngokungafaniyo nezinye iimeko zedesktop, izinto ezingadityaniswanga kakuhle. Endaweni yokuba izinto zizimele, kwaye nganye inokusetyenziswa ngokuzimeleyo ngokuxhomekeka okumbalwa.
I-Pantheon yindawo yedesktop ephantsi kophuhliso njengoko iyimeko-bume yedesktop esetyenziswa kwi-Elementary OS, le meko yabhalwa kwasekuqaleni kusetyenziswa iVala.
Ukuyifaka sivula i-terminal kunye nohlobo:
Ukhanyiso lwalusele luguqukile xa i-GNOME okanye i-KDE zisasebusaneni, kwaye nangona inguquko yayo iye yehla okwethutyana ngoku, iseyindawo ye desktop ebangela inkanuko yokwenyani. Zimbalwa izabelo ezikhetha njenge-desktop emiselweyo, kodwa oko akuthethi ukuba asinakho ukuyifaka ngokulula ukuba siziva ngathi siyayithanda
Ukuyifaka sivula i-terminal kwaye sichwetheze:
Ngumphathi wefestile, hayi imeko-bume yedesktop. Ibhokisi evulekileyo inoxanduva lokugcina iiwindows zivulekile kwiscreen ayikho enye into. Oko kuthetha ukuba ufakelo lwe-Openbox aluniki ukufikelela ngokulula kwimenyu yokukhetha iphepha lodonga, ibar yomsebenzi okanye ipaneli yenkqubo.
Oku akushiyi bucala onke amathuba okukwazi ukulungelelanisa kunye nokuphathwa kwayo, okukhokelela kwiindawo ezintle ezincinci.
Kofakelo lwayo siyenza kunye:
Okokugqibela, ezi zezinye zezona ndawo zidumileyo zedesktop kwiLinux, ukuba ucinga ukuba siyayifuna, ungathandabuzi ukunika ingxelo,
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Iidesika » Ezona ndawo zibalaseleyo zedesktop zikaBuntu kunye neziphumo
Kolu luhlu, i-desktop ye-Deepin ilahlekile. https://launchpad.net/~leaeasy/+archive/ubuntu/dde
Ndiyayithanda, inomdla ngokubonakalayo kodwa isaswele izinto ezininzi zokupholisha.
Omar Torn sitsho
Azizinzanga, njengendawo entle yesiqhelo?
Phendula uOmar Rasgado
UJimmi Bazurto Cobeña sitsho
Ndincamathele kwiplasma, kubuntu ngumthetho. ?
Phendula uJimmi Bazurto Cobeña
UVincent Valentine sitsho
IPlasma… I-KDE neon eyona ibalaseleyo…
Phendula kuVincent Valentine
UJavier Gracian sitsho
Phendula kuJavier Gracian
XFCE okanye i-Openbox
Incwadana yePlasma? Kudala ndisebenzisa iplasma ngolonwabo unyaka kodwa bendingayazi loo nguqulo. Yahluke njani kwantlandlolo?
Ndisebenzisa i-LXDE, ukukhanya kunye nedesktop ekhawulezayo (iLinux LXLE). Ukubulisa.
UTomás Cortés Berisso sitsho
Ndiyamthanda uMate! Andibambanga kubuntu kakhulu, andazi ukuba yintoni iplasma; Ndikwavavanya iStudiyo….
Phendula uTomás Cortés Berisso
Ndiyayithanda i-TDE (uZiqu-zintathu) imeko elityalwa ngumntu wonke kwaye engasetyenziswanga. Hi ndlela leyi, ngaba nangoku kuphuhliso?
UManuel S sitsho
Mva kwemini, ndifaka ubuntu 20.04 ngememori ye-usb, ndenze onke amanyathelo, kodwa xa ndiqala ukufakela yanika umyalezo "wokufumana inkqubo yefayile" kwaye yahlala apho ixesha elide.
Umbuzo, ndingaye kunye / okanye ngaba ndingaxhoma apho ndenze inkqubo kwakhona okanye ndiyiyeke iqhubeke ndide ndibone ukuba kwenzeka ntoni?
Phendula uManuel S
Ezona bhrawuza zibalaseleyo zeBuntu